Habeenkii Awooda, Maalintii Sharafta & Ereygii Nabiyada - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Suuradda Al-Qadar (Surah 97-Awoodda) waxay sharraxaysaa Habeenka Qadarka markii ugu horreysay ee Qur’aanku soo degay
Annagaa soo dajinnay Quraanka Habeenka LaylatulQadarka ah (sharafta leh).Ma taqaanna LaylatulQadarka.Waa Habeen ka khayr badan Kun Bilood (oo kale).Waxaana soo daga Malaa’igta (kale) iyo Malaku Jibriil habecnkaas idanka Eebe dartiis iyo amarkiisa.Waana Habeen nabadgalyo inta waagu ka haryi.
Suuradda Al-Qadar 97: 1-5
Suuradda Al-Qadr, in kasta oo ay ku tilmaamayso Habeenka Qadarka ‘ka kheyr badan kun bilood’ haddana waxay weydiinaysaa waxa uu ahaa Habeenka Qiyaame. Muxuu samaynayey Ruuxu oo ka dhigay Habeenka Qadarka mid ka wanaagsan kun bilood?
Surah Al-Layl (Surah 92-The Night) waxay leedahay mowduuc aad ugu eg Maalinta oo iftiinku wuxuu raacayaa Habeenka. Maalinku wuxuu ku imanayaa Sharaf, Eebbana wuu hanuuniyaa maxaa yeelay wax walba wuu ogyahay Bilowga ilaa Dhamaadka.
Eebe wuxuu ku dhaartay Habeenku markuu wax qariyo.Iyo markay Maalintu Muuqato (ifto).
Surah Al-Layl 92:1-2
Annagaa wax hanuuninna.Aakhariyo Addunbana Annagaa iska leh.Waxana idiinka digaynaa Naar kulayl daran.
Surah Al-Layl 92:12-14
Isbarbardhig Suuradda Al-Qadar iyo Suuradda Al-Layl kuwa soo socda: (2 Butroos 1:19)
Miyaad aragtaa wax la mid ah? Markii aan akhriyay suuradda Al-Qadr iyo suuradda Al-Layl waxaab soo xasuustay oraahdan. Waxay kaloo ku dhawaaqdaa Maalin soo baxda Habeen ka dib. Habeenkii waxyiga waxaa la siiyay nebiyada. Waxa kale oo ay nooga digaysaa in aynaan iska indha tirin farriimaha nebiyada. Haddii kale waxaan la kulannaa cawaaqib xun.
Tan waxaa qoray Rasuulka Butros, oo ahaa hormuudka xerta iyo wehelkii Ciise Masiix. Surah As-Saf (Surah 61-The Ranks) waxay ka leedahay xertii Ciise al Masih:
dadka xaqa rumeeyow noqda gargaarayaasha Eebe sidii kuwii Nabi Ciise ibnu Maryama Saaxiibadiis ahaa (Xawaariyintii) ee uu ku yidhi yaa Eebe iila gargaara, markaas ay dheheen annagaa ah gargaarayaashii Eebe, ka dib ay xaqa rumaysay koox Banii Israa’iil ka mid ah, kooxna ay ka gaalawday; Eebena ayiday (xoojiyey) kuwii xaqa rumeeyey (kana adkaadeen Cadawgoodii) oo iyagu ka muuqdeen (ka taliyeen) dhulkii.()
Suuradda As-Saf 61:14
Suuradda As-Saf waxay caddeynaysaa in xertii Ciise Masiix ay ahaayeen ‘caawiyeyaasha Ilaah’. Kuwa rumaysta farriinta xertu waxay helaan awooddan laga hadlay. Markuu ahaa xerkii hoggaaminayay, Butros, wuxuu ahaa hoggaamiyaha kuwa Ilaah caawiya. In kasta oo uu ahaa xerookgii Ciise Masiix, oo Marqaati ka ahaa mucjisooyinkiisa badan, maqlayay waxbaristiisa badan, oo arkay awooddiisa oo la fuliyay, Butros wuxuu weli ku caddeeyay korka in ereyada nebiyadu ay xitaa ahaayeen kuwo ‘hubaal’ badan.
. Bal muxuu uga sii hubay nebiyada intii uu isagu arkay? Wuxuu sii wadaa:
2 Butros 1: 20-21
Tani waxay noo sheegaysaa in Ruuxa Quduuska ah ee Eebbe ‘qaaday’ nebiyadii, sidaa darteed wixii ay akhriyeen dabadeedna ay qoreen ‘xagga Ilaah’. Tani waa sababta Habeenkan oo kale uu uga fiican yahay kun bilood maxaa yeelay wuxuu ku qotomaa Ruuxa Quduuska ah halkii uu ka ahaan lahaa ‘doonista aadanaha’.
Suuradda As-Saf waxay noo sheegaysaa in kuwa dhegta u dhiga farriinta Butros ay heli doonaan Awooddii la adeegsaday Habeenkii Xoogga oo ay adkaan doonto.
Ku noolaanshaha wakhtigii Nebi Ciise Masiix, ‘nebiyadii’ uu Butros wax ka qoray waxay ahaayeen nebiyadii ku jiray waxa hadda lagu magacaabo Axdigii Hore – Kutubtii Quduuska ahayd ee Injil ka hor yimid. Tawreedka Nabi Muuse waxaa ku jiray xisaabihii Aadan, Qabil & Haabiil, Nuux, Luud iyo Ibraahim.
Waxa kale oo ka mid ahaa qoraaladii markii Muuse ka hor yimid Fircoon dabadeedna qaatay Sharciga Shareecada, iyo sidoo kale allabaryadii walaalkiis Haaruun, oo Suuratu Baqarah lagu magacaabay.
Xiritaanka Tawreedka ka dib waxaa yimid Zabur halkaas oo Daawuud loo waxyooday inuu ka hadlo Masiixa soo socda. Nebiyadii kala dambeeyay ayaa markaa wax sii sheegay Masiixa oo ka imanaya gabadh bikrad ah, oo boqortooyada Alle loo furi doono dadka oo dhan, iyo sidoo kale dhibaato weyn oo u iman doonta Addoonka iman doona.
Markaas magaca Masiixa ayaa la sii sheegay, oo ay la socdaan wakhtiga imaatinkiisa, iyo sidoo kale Ballan -qaadkii Diyaariyaha. In badan oo naga mid ah ma helin fursad aan ku aqrin karno qoraalladan. Halkan, oo leh xiriiriyahan kala duwan, waa fursad.
Suuradda Al-Layl waxay ka digaysaa Naar soo socota. Suuradda Al-Qadr waxay caddeynaysaa in Ruuxa Ilaah uu shaqeynayay Habeenkii Xoogga.
Suuradda As-Saf waxay u ballanqaadaysaa Awood kuwa rumeeya fariinta xerta. Butros, hoggaamiyaha xertaas, ayaa markaas na waaniyasi aad ‘u dhugto’ muujinta nebiyadii ugu horreeyey, oo la bixiyey Habeenkii, kuwaas oo sugayay Maalinta. Miyaanay caqli badnayn in farriimahooda la ogaado?
Tags:habeenka laylatul qadriganabiyada tawrtanabiyada zabuurRasuul Petersoo dajinta kutubtasuurada 61suurada 92suurada 97suurada al-laylsuurada as. -safsuuratu al-qadrwaxyi Allexertii ciise al Maasiih